October 2012 Blog Posts (132)
दसैँ दशा दिएर गयो धनबहादुरको परिवारलाई
माडी । ‘दसैँ नै हो की यो मेरो दशा किन आएको?’ सायद यी शव्दहरुको शिलसिला यसरी मिलेर आउने नै थिएनन् होला यस्तो नहुने भएको भए । यस्तै दशा दिएर गएको छ यसपालिको दसँैले चितवन माडीको अयोध्यापुरी गणेशगञ्जका धनबहादुर परियारको परिवारलाई ।
घरको कमाइ गर्ने १२ बालबालिकाका एकमात्र मूली थिए धनबहादुर परियार । जसोतसो गरेर ती बालबालिकाका आवश्यकता टार्दै आएका थिए परियारले ।
परिवारको बाँच्ने आम्दानीको स्रोत उनैमात्र थिए । तर गरिबीका कारण दसैँजस्तो महान चाडमा समेत आफ्ना परिवारलाई मासु किनेर खुवाउन…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 31, 2012 at 10:00pm — No Comments
गजल जम्काभेट सकियो ।।
सुदूर पश्चिम गजल मञ्च अछाम शाखाको आयोजनामा आज सदरमुकाम मंगलसैनमा गजल जम्काभेट कार्यक्रम भएको छ । ३० जना बढी श्रजक श्रष्ठाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा विभिन्न श्रष्ठाहरुले आ आफ्ना गजल वाचन गरेका थिए । गजल मञ्च अछाम शाखाका उपाध्यक्ष दिनेश अव्यक्त घोडासैनीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अछाम साहित्य प्रतिष्ठानका सचिव टेकराज भण्डारी, गजल मञ्चका सचिव हिमाल उदाशी, पत्रकार पुष्पराज भट्ट, जयगढ उपशाखाका अध्यक्ष विजय खत्री, कमलवजार उपशाखाका अध्यक्ष सुवास अधिकारी, नारी श्रष्ठा दुर्गा…
Added by Tek Raj Bhandari on October 31, 2012 at 7:54pm — No Comments
गौरीखेतमा किन झुलेनन् धानका बाला
हुन त दोलखामा हिमाली जिल्ला हो । हिमाली जिल्ला भए पनि मिस्रित खालको हावापानी पाइने भएकाले दोखलामा धान खेती राम्रै हुने गर्छ । तर यसपाली गौरीखेतमा धानका बाला झुलेका छैनन् ।
धान काट्ने र थन्क्याउने बेला सुरु हुँदै गर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दोलखामा…
Added by sherbhhadur bhujel on October 31, 2012 at 5:00pm — No Comments
विद्यार्थीलाई ठग्ने विद्यालयसँग स्पष्टिकरण, नियम मिच्दै कक्षा चलाउँदै विद्यालय
भरतपुर । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भरतपुरले अनुमति लिएभन्दा माथिको कक्षा सञ्चालन गरि विद्यार्थि तथा अभिभावक ठग्ने विद्यालयहरुसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । शिक्षा विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको १२ वटा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यसरी स्पष्टीकरण सोधिएका विद्यालयहरुले आफूले अनुमति लिएको भन्दा माथिल्लो तहका कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई अनुमति लिएको तहको…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 31, 2012 at 8:30am — No Comments
फ्याउरे गुण्डा भनेकोमा युवा संघलाई किन टाउको दुखाइ
भरतपुर । प्रहरीको दैनिक तारेखमा रहेका आफ्ना कार्यकतालाई फ्याउरे गुण्डा भनेको भन्दै युवा संघले आपत्ति जनाएको छ । पूर्वाग्राही ढंगबाट आफ्ना संगठनका जिम्मेवार नेतालाई प्रहरी प्रमुखले अपशब्द बोल्ने, पत्रपत्रिकामार्फत गालीगलौज गर्ने गरेको भन्दै युवा संघ चितवनले आपत्ति जनाएको हो ।
संघका चितवन जिल्ला अध्यक्ष प्रल्हाद प्रधानले सजायका लागि कानुनी बाटोको विकल्प हुदाँहुदै यसविपरीत चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपककुमार थापाले शान्ति सुरक्षाका नाममा आफ्ना नेतालाई दुःख दिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत खेद…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 31, 2012 at 8:25am — No Comments
स्वर्ग जाने आश थियो पिचास पो भइन्छ की.......?
भरतपुर । बाँकी जीवन धार्मिक क्षेत्र देवघाटमा बिताउने उद्देश्यले रोटरी करुणालय वृद्धाश्रममा बस्दै आउनुभएकी ७९ वर्षीया वृद्धा उमादेवी खनाललाई बाँदरले चिथोरेर ज्यान लिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । नजिकैको वन क्षेत्रबाट वृद्धाश्रममा दैनिक आउने बाँदरबाट उहाँ त्रसित हुनुभएको हो ।
‘केही दिनअघिमात्रै मैले नै शरीरमा लगाएको मेक्सी सबै च्यातिदियो’, उहाँको दुःखेसो छ, ‘बूढेसकालमा धार्मिक क्षेत्रमा मर्न पाए…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 31, 2012 at 8:13am — No Comments
जुवा खेल्ने पक्राउ
भरतपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जुवाखेलिरहेको अवस्थामा १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले बछ्यौली गाविसबाट दुई लाख २० हजार ३३० रुपैयाँसहित १० जना र माडीबाट रु.२३ हजार नगदसहित आठ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक टंक भट्टराईले बताउनुभयो । उनीहरुलाई जुवा ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुस चालीस पक्राउ, पौने दुई लाख राजस्व…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 31, 2012 at 8:05am — No Comments
किन आँखा जाँदैन कसैको म्याग्नेसाइटमा ?
नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड नेपालको एकमात्र म्याग्नेसाइट कम्पनी हो । आजभन्दा करिब तीन दशक अघि स्थापना भएको यो उद्योग सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको माङ्खा गाविस-१ सिम्ले लामोसाँघुमा रहेको छ भने यसको खानी क्षेत्र दोलखा जिल्लाको लाँकुरीडाँडा गाविसको खरीढुंगा भन्ने…
Added by Tumaraj Koirala on October 30, 2012 at 9:00pm — 1 Comment
चालीस पक्राउ, पौने दुई लाख राजस्व संकलन
चाडपर्वसँगै प्रहरी सक्रियता बढ्दो
भरतपुर । चाडपर्वसँगै चितवन प्रहरीले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यस सालको दसँैको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्ममा विभिन्न आरोपमा चालीस जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको हो ।
गत असोज ३० गते घटस्थापनाको…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 30, 2012 at 8:38am — No Comments
सिप्रिङ आयोजनाले तिहारपछि व्यवसायिक उत्पादन गर्ने
साना ठुला गरी एक दर्जन भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण भईरहेको दोलखामा सिप्रिङ खोला जलविद्युत आयोजनाले तिहारपछि व्यवसायिक उत्पादन गर्ने भएको छ ।
६० मेगावाट क्षमताको खिम्ति जलविद्युत आयोजना पछि निर्माणको भएको यो दोस्रो आयोजना हो । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत…
Added by sherbhhadur bhujel on October 29, 2012 at 4:30pm — 1 Comment
पण्डित र ढकालको पुनर्वहाली
भरतपुर । रेडियो त्रिवेणी १००.६ मेगाहर्ज बाट हटाइएका दुई पत्रकारहरुको पुर्नवहाली गर्न रेडियो सहमत भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको रोहवरमा उनीहरुलाई सोमबारबाटै काममा फर्कने वातावरण बनाउन सहमत रेडियो सञ्चालक सहमत भएको हो ।
दसैँ खर्चको विषयमा भएको विवाद पछि रेडियोले समाचार कक्षमा कार्यरत सुवाष पण्डित र अनिल ढकाललाई वर्खास्त गरेको थियो । सोही कारण रेडियो त्रिवेणीबाट हरेक राति आठ बजे प्रशारण हुँदै आएको त्रिवेणी व्रेकथ्रु समेत प्रशारण हुन सकेको थिएन् ।
Added by अल्टर कान्छो’ on October 29, 2012 at 3:42pm — No Comments
पारिश्रमीक माग्दा निकालीए पत्रकार
चितवन । चितवनको रेडियो त्रिवेणीले दशैं पेश्की माग गर्ने श्रमजिवि पत्रकारहरुलाई कामबाट नै निकस्कासन गरेको छ । दशैं पेश्की माग गर्ने समाचार शाखा प्रमुख सुवास पण्डित र पत्रकार अनिल ढकाललाई रेडियो व्यवस्थापनले कामबाटै निस्कासन गरेको हो । आफूलाई ‘जनताको आवाज’ भन्ने रेडियो त्रिवेणीले वास्तविक जनताको आवाज बोल्ने रेडियो कार्यक्रम ‘त्रिवेणी व्रेक थ्रु’ प्रशारणमा समेत रोक लगाएको बताईएको छ ।
यसैबीच चितवनमा क्रियाशील पत्रकारसँग सम्बन्धित पेशागत संगठनहरुले सबै सञ्चार माध्यमहरुलाई श्रमजीबि पत्रकार ऐन…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 29, 2012 at 12:43pm — No Comments
च्यातीएको मेरो पर्स
सायद पाँच बर्ष भन्दा धेरैनै भयो मेरो यो च्यातिएको पर्स किनेको । कति रमाईलो क्षण हुन्थ्यो त्यतिखेर जब कुनै नयाँ कुरामा आफ्नो स्वामित्व आँउथ्यो । हुनत को खुसी हुँदैन होला र । कुनै बाहिर चीज आफ्नो हुदा । त्यस दिन पनि यस्तै यस्तै उत्सुकताले भरिदै म कृष्णनगरको एउटा फेन्सी पसलमा पुगेर पसले दाईलाई अनुरोध गर्दैे भनेको थिए दाई पर्स देखाउनुस त । पर्स निकै सानो चीज तर काम ठूलो यसको आफ्नै महत्ब र बिषेशता हुन्छ । संसारका बिरलै मान्छे होलान जसले पर्स बोक्दैन होला । आकार…
Added by Kamal Paudyal on October 29, 2012 at 5:30am — No Comments
कतारमा केटी हेर्ने रहर
भदौ अन्तिमदेखि असोजको पहिलो हप्ता कतार जाने अवशर जुटेको थियो । मरभूमिको देश कतारमा नेपालीलाई गर्मीले जति सताउँछ महिला देख्नै, भेट्नै नपाउनु कम पीडादायक हुन्न रहेछ नेपाली युवालाई । सडकमा न त कतारी महिला देखिन्छन्, न त नेपाली वा फिलिपिनो नै । एक झल्को हेर्न पनि कि त होटलमै पस्नु पर्यो कि त मेला पर्व पर्खिनु पर्यो ।
दोहामै बस्ने र केहि घुमफिर गर्ने हैसियत राख्ने नेपाली साँझपख सुक वाकिफ जाँदा रहेछन् जुन ठाउँलाई नेपालीले आफ्नै नाम राखिदिएका रहेछन ईरानी मार्केट…
Added by Sunil Neupane on October 28, 2012 at 8:30pm — 1 Comment
दलित र गैर दलितको विवाद पाँच ६ दिन पछि मिल्यो ।।
दसैको अष्टमीको दिन पुजा गर्ने क्रममा दलित र गैर दलितबीच भएको विवाद पाँच दिन पछि मिलेको छ । मार्तडी ५ रावल वाडामा रहेको बडिमालिका मन्दिरमा पुजा गर्न नमिल्ने भन्दै स्थानीय गैर दलितले दलितमाथि हातपात गरेपछि बढेको विवाद पाँच दिन पछि सर्वपक्ष्ीय छलफलबाट मिलाइएको हो । अष्टमीको साँझ पुजा गर्न नमिल्ने भन्दै स्थानीय युवाहरुले दलितमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना भएको थियो । आफूहरुमाथि गैर दलितहरुले मन्दिरमा गएको निहुमा हातपाट गरी घाइते बनाएको भन्दै पीडित पक्षका नाममा दर्ता गरिएको उजुरीलाई अगाडी… बाँकी
Added by Purna Bahadur Khadka on October 28, 2012 at 4:32pm — No Comments
पुस्तौदेखि सिङ्गौ परिवार खलिया
बाजुराको कोटीला गाविसको खोयाका २३ दलित परिवार जीविकोपार्जनका लागि पुस्तौंदेखि स्थानीय गैर दलितहरुको खलिया बस्न बाध्य छन् । स्थानीय मनबहादुर मल्ल र पाण्डुसेनका मुखिया काँसी जेठाराको जग्गामा घरवस्ती भएका यी दलित परिवारले १५ पुस्तादेखि उनै जग्गाधनी गैर दलितहरुकै खलियाका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
जग्गाधनीको खेतीपाती र सम्पूर्ण कामकाज गरे वाफत जग्गाधनीबाट वर्षको दुई पटक एक–एक क्वीन्टल अन्न पाएर गुजारा गर्ने परम्परा नै खलिया प्रथा हो । खलिया काम गरे वाफत आउने अन्नले नै आफूहरुले…
Added by Purna Bahadur Khadka on October 28, 2012 at 4:30pm — No Comments
दशैँ आयो, तिहार आउदैछ
हट्यो सारा हिलो मैलो हरायो पानीको वर्षा
पानीको वर्षा घटेर होस् वा हिलो मैलो…
Added by Ajaya Dhungana on October 24, 2012 at 12:00am — No Comments
फरक विश्वविद्यालयको फरक कक्षाकोठाबाट
नेपालको वरीष्ठ विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विताएका करीब आठ वर्ष र सोही क्रममा निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्दै विताएको समयसँग अहिले आएर यूरोपेली शैलीमा अध्ययन गर्ने…
Added by Raman Paneru on October 21, 2012 at 3:02pm — No Comments
करिव एक महिना अघि लमजुङको एउटा भेलामा देव गुरुङजीले मर्स्याङ्दी-२ आयोजनातिर औंल्याउँदै 'हामी यो आयोजना बनाउन दिंदैनौं' भन्नुभयो। उहाँहरुले नौ\_नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ लाइ पनि बनाउन दिंदैनौं भन्नुभएको छ। माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १२ प्रतिसत विजुली र २७ प्रतिसत शेयर सित्तैं पाउँछ। अरुणले २१.९ प्रतिसत विजुली सित्तैं दिने शर्त गरेकोछ। रोयल्टी र करहरु त तिर्नैपर्छ। मैले सुनेअनुसार ३० बर्षपछि ठूला आयोजनाको स्वामित्व स्वत सरकारमा सर्छ। डेढ दशकअघि माधव कुमार नेपालजीहरुले यसैगरी…
Added by Ananda Ram Paudel on October 21, 2012 at 2:30pm — No Comments
दसैँ खर्च जुटाउन खसी लिएर बजारतिर
गैँडाकोट । दसैँको खर्च जुटाउनका लागि दैनिक जसो गैँडाकोट गाविसको विकट पहाडि क्षेत्र ढोडेनी तथा तनहुँको कोटा गाविसका किसानहरु घरमा पालेका खसी बोका लिएर गैडाकोट तथा चितवनको नारायणगढ बजार झर्ने गरेका छन् ।
दसैको चहलपहल सुरु भएसँगै उनीहरुलाई समेत दसैँ लागेको हो । त्यही दसँैको खर्च जुटाउनका लागि वर्षभरी पालेका…
Added by आनन्द पोखरेल on October 20, 2012 at 6:00pm — No Comments